Cannes: sanadka haweenka Afrika ee haweenka - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » International Cannes: sannadka oo ah agaasimaha haweenka Afrika - JeuneAfrique.com
Sida sanad kasta, waa in yar ka yar bil ka hor Festival filimada ee Cannes sida ay madaxweynaha, madaxa hore ee Canal +, Pierre Lescure, iyo ergay guud Thierry Fremaux, bandhigay inta badan xulashada rasmiga ah. Iyo gaar ahaan ku dhawaad ​​dhammaan filimyada fursad u helaya, si aad u badan ayaa loo raadsaday, ka qaybqaataan tartanka Palme d'Or iyo kuwa la baadhi doono sida qayb ka mid ah qaybta A Xaqiijinta qaarkood.
Doorasho ah oo ku faani doonta qawaaniinta ugu weyn ee Croisette, waxaan arki doonaa, laakiin sidoo kale haweenka filim sameeyayaasha ah, oo metela ku dhawaad ​​seddex meelood oo ka mid ah wadarta - marka hore. Qaar ka mid ah qaarada yurub ma ahan wax war ah oo ay ka mid yihiin seddexda filimaan ee Afrikaanka ah - Senegal, Algerian iyo Morocco - oo ka mid ah kuwa nasiib u leh, kuwaas oo leh gaar ahaan saddexda filimood ee filimada; Saddexda dhan, sidoo kale ma ahan mid caadi ah, waana mid aad u fiican mustaqbalka, filimka koowaad ee filimka.
dhinaca tartanka, Mati Franco-Senegalese Diop kuwaas oo uu leeyahay u diida raacitaanka ah rooga cas, tallaabooyinka caan ah oo ka mid ah ku Qaraqmeen des ciidaha u kali u taagan yihiin qaaradda iyadoo uu feature filimka ugu horeeya, Atlantic. Gabdhaha muusikada Wasis Diop, Jiikil Diop Mambety, qoraaga filimka dhaqanka Touki Bouki , taas oo ay u goysay filim dhexdhexaad ah oo qurxoon (Thousand Suns) ee 2013, Mati Diop horay ayuu u sameeyay filim gaaban oo magaciisa la mid ah, oo sidaas ku dhawaaqay "dheer" oo aan ku arki doonno Cannes. Midkee ayaa soo jeedin doona, oo ka fogaanaya miisaaniyada caadiga ah, sheeko udub dhexaad u ah asalka asalka ah ee isku-dayga qarsoodiga ah ee ku wajahan Yurub ee dhalinyarada reer Senegal.
Algerian Mounia Meddour, oo talooyin dhawr sano ka hor soo diray Filimada aljeria, neef cusubsoo bandhigi doonaa Papicha marka la eego Xaqiijinta qaarkood. Filim lagu magacaabo Nedjma, oo ah sheeko caan ah Kateb Yacine. Ardayda, xilliga Dagaalka Sokeeye, waxay diideen in ay ka baxaan nolol dhalinyaro ah oo casri ah oo xor ah, waxay u ballanqaadday xirfad ahaan inay tahay qaab-dhismeedka adduunka. Algerian oo ah hogaamiyaha Aljeeriya ayaa horay u soo saaray farriin horudhac ah sida loo ogaado sida ugu dhakhsaha badan ee loo arki karo kacdoonsanayaal kuwaas oo la kulmi doona dhibaatooyin badan oo xanuun leh.
Sii codso haweenka aan la arki karin
Waxay ku jirtaa isla qeybta A Qaddarka qaarkood ee aan mashruucan samayn doonno Adam, filimka koowaad ee filimka lagu maamusho oo ay maamusho actorka Morocco iyo sawir gacmeedka Maryam Touzani. Isuduwaha filinka ugu caansan ee Moroccan, Nabil AyouchFilimkii ugu danbeeyay, oo ay ahayd qoraa-qoraha, waxay la cayaartay mid ka mid ah doorka ugu muhiimsan: ee haweeney xor ah oo xadgudub ah, Salima. Laakiin sidoo kale waxay tahay qoraaga laba dokumenti ah oo ku saabsan qaddarka gabdhaha reer Moroccan ee gabdhaha ah iyo kuwa gabdhaha yar yar ee adeegga borrigao. Mawduucyada la xidhiidha "baahida loo qabo inay siiso haweenka aan la arki karin". Adam, oo isku mid ah, waxay sheekada sheekada u sheegi doontaa hooyada kelidii ah oo dooneysa in ay korsato ilmaheeda cusub si uu u helo meel bulshada ka mid ah.
Saddexda agaasime ee shirkadan waxay ku jiri doonaan shirkad aad u fiican oo ku yaala Cannes halkaas oo sanadkan aynu ka soo qaybgeli doonno, ka dib markii loo yaqaan '2018', oo ah soo celinta magacyada ugu waaweyn ee farshaxanka toddobaad ee xulashada rasmiga ah. Kuwa ka mid ah kuwa isku dayaya inay ku guuleystaan ​​Palme d'Or waa Pedro Almodovar, Jim Jarmush, Marco Bellochio, Xavier Dolan, Terence Malick ama dhammaan Erzya Suleiman oo aad u yar. Ma aha in la xuso filimkan horayba laba jeer "webbed" iyo kuwa ujeedkoodu noqon karo: rikoodh buuxa: Ken Loach iyo walaalaha Dardenne. Ama Quentin Tarantino, kuwaas oo ku biiri kara xulashada, waxaa la sheegayaa, haddii uu ku dhammeeyo wakhtiga dib u habaynta iyo soo-saarista qaabkiisa ugu dambeeyay, weli waa horumar.
Shiinaha waxay raadinaysaa dabayl labaad oo ah "jidadka kabadhada" ee Afrika
Canada - Canada, oo ah waddan isbeddel ku meel gaar ah